indlu ekhethekileyo yokwamkela iqela lakho i-RNT 69 69 - I-Airbnb
indlu ekhethekileyo yokwamkela iqela lakho i-RNT 69 69
EL REFUGIO, Ifumaneka unyaka wonke. Ilungele ukubaleka ngeempelaveki, iindibano zosapho, ibekwe kwindawo ecwangcisiweyo ye "Coffee Cultural Landscape", esanda kubhengezwa yiUNESCO njenge "World Heritage Site".
UKUYA kwi-39 abantu kumagumbi ayi-9, UKUSUKA ABANTU abayi-16 eyongezelelweyo i-14 yase-US ngomntu ubusuku bonke ihlawuliswa, iindwendwe zemini zihlawula i-10 US / P / D.
Unokuzisa umqeshwa wakho kunye / okanye uqeshe omnye kwindawo esetyenziselwa indlu; Nje ukuba ubhukishe, siya kukunxibelelanisa okanye sikugcine egameni lakho.
Kwi-'EL REFUGIO' uya kuyifumana indawo ojonge kuyo ukuchitha iholide ongasoze ulibaleke, kunye nazo zonke iinkonzo ezikufutshane, kodwa kumgama ofanelekileyo wokuba nemfihlo kunye noxolo.
Unokonwabela umdlalo we-ping pong, ukufunda phantsi kwemithi yesundu, ukulala kwi-hammock kunye nokuhlamba ebusuku kwi-Jacuzzi yethu yamanzi ashushu enomthamo wabantu abayi-12.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, iibhedi ezincinci eziyi-2
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-5, iibhedi ezikhweleneyo eziyi-3
Ukusuka kwindlu sinombono onelungelo. Indawo yaseSantagueda yindawo ekuyiwa kuyo ngenxa yemozulu encomekayo, inazo zonke iinkonzo ezikufutshane: oogqirha, ivenkile enkulu, icawa, amaziko olonwabo, ikhemesti, indawo yokulala eqhelekileyo, iidokodo ze-intanethi kunye nemfonomfono. umgama omde, iindawo zokutyela kunye neendawo ezikufanele ukutyelelwa ezifana neefama zekofu, iiorchids, iguadua .....
Iinkqubo ezikhethekileyo: ukukhwela ihashe kunye ne-burroteca, ukuloba kwezemidlalo, ukuhamba ukuya emlanjeni okanye umlambo, ukutyelela ibhokhwe yabakhenkethi okanye i-willy jeep,
kufutshane neziza zomdla wesizwe ezifana nezi:
I-LOS NEVADOS PARK kunye neRUIZ THERMALS, izixeko ezinjenge-MANIZALES ezinemithombo yazo eshushu ekwindla kunye nomhlaba ophilayo; i-BULLFIGHTING FAIR ngoJanuwari, kunye neefandesi zayo zemveli kwiklabhu yaseManizales apho unokufikelela khona ngekhadi lokutshintshiselana okanye umenywe lilungu, kunye neRIO BLANCO AVES NATURAL RESERVE, ipaki yamanzi, ipaki ye-RECINTO DEL PENSAMIENTO, YARUMOS eco- ipaki,
Imithombo eshushu yaseSanta Rosa de Cabal
Parque del Café, Panaca, UKUMARI biopark, KAMALA igadi engaqhelekanga.
Konke oku kunye nokunye okuninzi kunokutyelelwa kwaye ukonwabele ngokupheleleyo, uchitha ubusuku kwiNdawo yokuKhusela ukusukela emva kohambo olude lokutyelela, uya kufika kule oasis apho unokuphumla khona kwi-jacuzzi okanye ukonwabele amalungiselelo okupheka kwiinkuni (njengaloo maxesha. khumbula)
Kufuphi neklabhu yelizwe yaseManizales kunye nePereira, apho ngekhadi lokutshintshiselana unokonwabela iinkundla ze-tennis, iigalufa kunye nezinye iindawo.
Ndiya kufumaneka nge-wsp ukuya kubo okanye kumphathi; Eliecer sobabini siyakufumaneka ngayo nayiphi na into ekhoyo kwaye sisombulule nakuphi na inkxwaleko.Uya kuba nethuba lokunxibelelana nathi ngeselfowuni.Sifumaneka iiyure ezingama-24 ngosuku kwaye siyabulela xa uqhagamshelana nathi xa kuthe kwakho impazamo encinci, amathandabuzo acinywe kwangethuba ayizongxaki.
Ndiya kufumaneka nge-wsp ukuya kubo okanye kumphathi; Eliecer sobabini siyakufumaneka ngayo nayiphi na into ekhoyo kwaye sisombulule nakuphi na inkxwaleko.Uya kuba nethuba lokunxib…
Inombolo yomthetho: 69009